Strategy Makusoo Football | Express Sports & Makusoo Casino | Best Talooyin Online
Strategy Makusoo Football – Keep What you Win with Sports.expresscasino.co.uk
Ma waxaad tahay 'xamaasadeysan oo sports' core adag kuwaas oo uu mar walba rabay in aan meel mar mar ah 'Bet', laakiin bartey helay naftaada ka gaabsadaan oo dhan wadahadalo ku saabsan u qalmay, dhibic faafo, leyliyo ee iyo sportsbooks jidka sii socday ayaa idinka korraysaa?
Haddii ay haa tahay, ka dib aad nasato. Waxaan leenahay oo keliya waxa ay qaadanayso in la siiyo aad khabiir xeelado sharadka oo aad ka heli tallaabo-diyaar in waqti lahayn at dhan.
Well, Waxaan beensheegayaal ahayna ma aad ogtahay in ay mar koobka aduunka oo helay hab aad si geeska a nice yar si ay u daawadaan ciyaarta. Sidaas, dib u fadhiisan, Korka cabniin ah oo akhri on.
Si aad u dumin wax oo fahmaan xeeladaha fiican, bal aynu eegno qaar ka mid ah si joogto ah loo isticmaalo Khamaarka marka la eego, sida 'khadadka lacagta', 'Curyaanimada' iyo 'dhibic faafo'.
A line lacag waa Khamaarka line muujinaya wadarta lacagta ciyaaryahan waa sharad ku saabsan, si ay u guuleysan xaddi tidhaahdaan $100. Si aad ku guuleysan bet line lacag ah, kooxda in uu yahay sharad ku fudud in uu ku guuleysto ciyaarta. Fidda waxaa dhisay hareeraha qalmay run halkii ay u qalmay caadiga go'an. Si kastaba ha ahaatee, lacagta ka dhigaya ciyaaryahanka ugu kala duwan yihiin laga yaabo in ka ciyaarta ciyaarta, ku salaysan qalmay kiciyey.
Bal aynu eegno tusaale si ay u fahmaan wax ka fiican. Tixgeli ciyaar kubada cagta khiyaali ah, halkaas oo labada kooxood – ugu cadcad shakhsiyeed iyagoo Cowboys iyo Packers, waxaa uu ciyaaray kulankii kasta oo kale ee horyaalka NFL.
Halkan waxa qalmay u eg xilligan:
Blog Strategy Makusoo Football Will Sii dib markii Table Bonus ee hoos ku
Sidaas, at tusaale ahaan this aad u; Packers waxaa socda cadcad – sida ka muuqata calaamad laga jaray ee prefixing ay tahay tiro kisi ah ee 130, halka Cowboys waxaa loo tixgelinayaa hooseysa marka ay – sida ka muuqata calaamad lagu daray ka prefixing ay tahay tiro kisi ah ee 140.
Sidaas on aragti dhaw, taas macnaheedu waa in ciyaartoyda doorta inay sharad on cadcad, kiiskan, Packers ah, yeelan doonaan in ay halis $130 dollars inuu ku guuleysto lacagta la hubo ah $100. Dhanka kale, ciyaartoyda doorta inay sharad on QEF ama ay dhacdo in this Cowboys waxay yeelan doonaan halis $100 inuu ku guuleysto lacagta la hubo ah $140.
Ogsoonow in, inkasta oo intooda badan khadadka lacag xeelado sharadka waxaa gaadhsiiyey in cutub oo $100, ciyaaryahanka waa lacag la'aan u yeelato qadar yar waxay ka badan. line lacag ay sii shaqeeyaan oo ay la socdaan khadadka la mid ah sida kor ku xusan ka wada hadleen.
Ereyga curyaanimada in footballbetting waa istaraatijiyad in uu isku dayayaa in la abuuro boosteejo ah oo isku dheeli tiran oo barbareeyay ciyaaro dhexmara labo kooxood oo ka mid ah sinnaanshaha calibres '. In this method, sixitaanka la sameeyo si ay u qalmay ay guushu ku hooseysa marka sida in ugu cadcad haayno in ciyaarta u leeyihiin in ay goolal tiro dheeraad ah oo gool xitaa baxay kooxda ay xafiiltamaan. Tani waxay ka caawisaa buundada in farqiga iyo xataa fursadaha isagoo ku guuleystay run ah.
Ereyga dhibic faafo waxaa loola jeedaa naafada ah in la saaro kooxda ka xoogbadan, marka la eego qodobada ay tahay in la dhaliyay in ka badan iyo wixii ka sarreeya tirada go'an. Aynu ka fiirsan tusaale la mid ah halkaas oo Cowboys waxaa jooga eeyihii hoos iyo Packers sii cadcad.
Haddii Packers waxaa loo arkaa kooxaha ugu cadcad by 10 dhibcood Cowboys, faafidda barta ayaa lagu wadaa sida 10. Sidaas, haatan ciyaartoyda Khamaarka kooxda Packers ku guuleysan doontaa sharad haddii Packers guuleysan by 11 farta ama kor ku xusan, ka badan score ee Cowboys ah. Kuwa sharad Cowboys si fudud ku guuleysan bet haddii ay koox midkood ku guuleysto ciyaarta ama lumiyo by 9 dhibcood ama wax ka yar.
Natiijadan ayaa waxa ay sidoo kale soo afjari karo in warega haddii Packers guuleysan dhaliyay sax ah 10 dhibcood. Kiiskan, qalmay waxaa evened baxay iyo lacagta la wadaago.
Football Blog Strategy Makusoo for Sports.expresscasino.co.uk. Ka dhig Waxa aad ku guuleysato!